chikwata chedu ane rakakura Portfolio yakaipa inobva zviuru Chinese omunharaunda zvirongwa zvakadai Beijing Jianwai Sohõ, Zhujiang Newtown, wekuyeuka Nanjing Urayai kuti pose ndivo kuwedzera munzvimbo Asia & Pacific, Middle East uye Europe.
Umbwa muna 2002, Frontop akagadza wayo mhiri kwemakungwa dhipatimendi kuwedzera pamusika yose muna 2010. Now Frontop razova rimwe vaitungamirira mapurani Visualization makambani ari China. Tine rakazaruka Mahofisi Beijing, Shanghai, Guangzhou uye Shenzhen. Zvaaishandisa ane unyanzvi uye ruzivo chikwata 3D visualizers, vemifananidzo uye akajeka vagadziri, tinoedza kupa vatengi hwedu yepamusoro basa. By vatanga basa Workflow, takagamuchira kukura kugutsikana uye mukurumbira kubva dzedu vatengi.
Kushandisa mapurani Visualization basa kusanganisira 3D mapurani kushandura, 3D akachangamuka, multi-vezvenhau kuti zvakagadzirwa masangano, Real Estate makambani uye mapurani consultants, Frontop acharamba kuramba kuvandudza unhu hwedu uye basa kuti zvinodiwa uye zvinodiwa kubva dzedu vatengi.
Nhasi tangoita anovimba naye uye kwenguva Kudyidzana pakati vamwe pamusoro ezvivako uye vagadziri kusanganisira 10 Design, Gensler, Aedas, Benoy, DP Architects, BDP, South China University of Technology, Tongji University etc.
3d Interior neshanduro , Architectural shanduro, 3d shanduro Visualization , Interior shanduro , 3d shanduro , China Interior shanduro ,
Kwete 18. Agricultural Machinery Institute, No. 261 Wushan Street, Tianhe District, Guangzhou, China.
3D Software kuti Creat kuti kushandurwa